Edito Fety maha lasa saina
Ny fanasana ny filoha Rwandey ho vahiny manankaja sy manokana angamba heverina fa fahasahiana goavana ary iriana ho fakana traikefa amin’ireo firenena niray lalana amintsika taloha saingy efa nivoatra lavitra kosa.
Zary fety mahalasa saina ihany iny notanterahana tetsy Mahamasina omaly iny raha ny eo amin’ny resaka diplaomasia fotsiny no asian-teny. Inona no antony nanasana ny tafika frantsay, maorisianina ary kaomorianina ? Fankalazana ny fiverenan’ny fahaleovantenan’iza marina moa omaly ? Efa ho 5 taona mahery izao no niteraka adihevitra sy resabe ny fibahanan’ireo arendrina sy fitaovam-pankalazana fahaleovantena “sinoa” ny toeran’ireo arendrina sy fitaovam-pankalazana fahaleovantena “Malagasy” teto Madagasikara ary mbola nampipetraka an’io fanontaniana hoe fahaleovantenan’iza no hankalazaina eto io saingy tsy nisy nihaino sy namaly. Mahonena ny maheno ireo Malagasy raiamandreny sy Malagasy sasany toa tonga saina ihany nefa tsy afa-nanohitra raha niteny hoe “izao izany sisa no arendrina ankehitriny” raha nahita ireny nanjelatra eran’ny tanàna ny alin’ny 25 jona. mainka niampy ny anjomaran-dry zareo afrikanina tatsimo koa aza ireo fanetry efa teo.